Ndiani Anokubhadhara? | Martech Zone
Chitatu, July 19, 2006 Chitatu, July 20, 2016 Douglas Karr
Dzimwe nguva tinokanganwa kuti isu pakupedzisira tinobhadharwa nevatengi vedu. Tom Peters ane chinyorwa chikuru nhasi nezve GM kubva kuGM insider, Mike Neiss:
“Tarisai, ndinosuwa shamwari dzangu nevandinoshanda navo ku [GM]. Asi ini handivanzwire tsitsi. Vakakanganwa dhizaini, vakakanganwa mutengi, vakakanganwa R&D, vakakanganwa kuti ivo [mota] kambani. Kufa kwavo kwaive pachena sarudzo. Kwete chiratidzo cheupfumi hwedu, asi sarudzo yakaitwa mubhodi board pa [GM]… Ndiko kwekupedzisira kushamisika kwekambani inonyura.
“Tarisiro yangu ndeyokuti vachave chidzidzo chezviitiko kumasangano ese anotarisira kuve akakura se [GM]. Huru inongoparara zvakanyanya. ”
Chinja [GM] nebhizinesi rako uye [mota] neindasitiri yako. Chinhu chipi zvacho chakafanana?
Tags: kasitomagmmike neiss